के बच्चा जन्मने बित्तिकै श्रवण परीक्षण गर्न सकिन्छ? – SatyaPatrika
के बच्चा जन्मने बित्तिकै श्रवण परीक्षण गर्न सकिन्छ?
डा योगेश न्यौपाने
२०७७ फाल्गुन २१, शुक्रबार प्रकाशित
बच्चा जन्मिने बित्तिकै श्रवण परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन। त्यसैले यो कुरा सर्वसाधारणले जान्न जरुरी छ। सुरुमै सुनाई जाँच गरी सुन्छ/सुन्दैन भनी पत्ता लगाउन आवश्यक छ। समयमै थाहा पाउन सके भविष्यमा निम्तन सक्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ भने उपचार पनि सहज हुन्छ।
बच्चाको बोली र भाषाको विकास हुनुभन्दा अगाडी नै श्रवण परीक्षण गरी सुनाई कम छ भन्ने पत्ता लगाउन सके श्रवण यन्त्र वा कक्लियर इम्प्लान्टद्वारा सुन्ने बनाउन सकिन्छ। उसलाई थोरै मात्रामा सिकाउँदा पनि बोली र भाषाको राम्रो विकास हुन सक्छ।
यदी बच्चाले कान पटक्कै सुन्दैन भने सानै उमेरमा उसको उपचार गर्न सहज हुन्छ। तोते बोली भएका बच्चाहरुको श्रवण परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ। अन्यथा बोली र भाषाको विकास राम्रो हुँदैन।
बच्चाले नसुनेपछि बोल्न सक्दैन। त्यसैले समयमै श्रवण परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
पछिल्लो समय नेपाल सहित विश्वमै बहिरोपनको समस्या बढ्दो छ। बढ्दो ध्वनि प्रदूषणले पनि बहिरोपनको समस्या बढाएको छ।
सामान्यतया कान कोट्याउने धेरैको बानी छ। तर यसो गर्नु हुँदैन। कान कोट्याउँदा कानको जाली फुट्न सक्छ।
कानमा तेल वा अन्य विभिन्न झोल पदार्थ हाल्नु हुँदैन। कारणवस कान पाकेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। घरेलु विधि अपनाएर ढिलो गर्नु हुँदैन। यसले समस्या झनै बढाउन सक्छ।
कानमा समस्या आए आफूखुशी औषधिको सेवन गर्ने धेरैको बानी छ। तर विशेषज्ञको सल्लाह बिना आफूखुशी औषधि खानु हुँदैन। विशेषगरी गर्भवतीले पहिलो तीन महिनासम्म आफूखुशी औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन।
बच्चाले कान कम सुन्छ भन्ने शंका लागेमा अभिभावक तत्काल चिकित्सकको परामर्शमा जानुपर्छ। चर्को आवाजले श्रवण शक्तिको क्षति हुन्छ। सार्वजनिक समारोह स्थलमा चर्को ध्वनि निकाल्ने बाजाहरु बजाउनु हुँदैन। मोबाइल, इयरफोनको सकेसम्म बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन।
चर्को ध्वनि निस्कने ठाउँमा काम गर्दा सकेम्म ईयर प्लग लगाउनुपर्छ। समय समयमा श्रवण शक्तिको जाँच गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणहरुलाई कान नसुन्नुको कारण, यसको बचावट र रोकथामको बारेमा सचेत गराउनुपर्छ।
श्रवण समस्या भएकाहरुको पुनर्स्थापना गर्ने कार्य लामो प्रक्रिया हो। औषधि र शल्यक्रियाद्धारा नसुन्नेलाई पुरै सुन्ने बनाउन सकिएन भने विशेष विधिद्धारा सुन्ने बनाउन सकिन्छ।
सुनाई समस्या मध्यम खालको छ भने श्रवण यन्त्रले पनि सुन्ने बनाउन सकिन्छ। यदी सुनाई समस्या तिव्र र त्यो भन्दा बढी छ भने श्रवण यन्त्रले काम नगर्न सक्छ। यसलका लागि कक्लियर ईम्प्लान्टको आवश्यक पर्दछ।
सुन्दै नसुन्ने र नबोल्ने बच्चाहरुलाई कक्लियर ईम्प्लान्ट गरेर सुन्ने र लामो अवधिसम्म स्पीच थेरापी गरेर साधारण बच्चा सरह बोल्ने बनाउन सकिन्छ। पुनर्स्थापनामा अभिभावकको भूमिकाले निकै महत्व राख्दछ।
नबोल्ने र नसुन्ने बच्चा पनि पुनर्स्थापनापछि साधारण विद्यालयमा गएर अन्य सरह पढ्न सक्छन्। अपाङ्ग बच्चा विभिन्न विधिबाट सपाङ्ग भएर मात्र पुग्दैन। उसलाई समाजले पनि स्वीकार गर्नु पर्दछ।
दोहोरो कुराकानी गर्नका लागि सुन्न जरुरी छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सुन्न सके बुझ्न सकिन्छ। बुझ्न सके बोल्न सकिन्छ। बोल्न र बुझ्न दुवै सके कुराकानी गर्न सकिन्छ।
दोहोरो कुराकानी दैनिक जीवन चलाउनका लागि नभई नहुने प्रक्रिया हो। समय समयमा बोली र भाषाको जाँच गर्नु पर्दछ। आमा बुवाले बच्चाको बोली र भाषाको विकास हुने बेलामा पर्याप्त मात्रामा समय दिनुपर्दछ। दोहोरो कुराकानीमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्दछ।
राम्रो संचार स्थापित गर्न सांकेतिक भाषा सिकौँ र सिकाऔँ। बच्चा बोल्दा प्रोत्साहन गररी समय दिएर उनीहरुको कुरा सुन्न जरुरी छ। बच्चाहरुसँग कुराकानी गर्दा सरल वाक्यको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ। बच्चासँग बोल्दा ढिलो र अलि लय हालेर बोल्नुपर्छ।
(त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा न्यौपानेसँग स्वास्थ्यखबरका लागि कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
पर्यटनमा प्रदेश सरकार : लक्ष्य धेरै, काम सुस्त